च्याम्पियन्स लिगबारे यी कुराहरु तपाईलाई थाहा नहुनसक्छ ?
युरोपको प्रतिष्ठित खेल च्याम्पियन्स लिगको फ्यानहरु विश्वभर रहेका छन् । युरोपका चर्चीत क्लबहरु यस लिगको उपाधि जित्नुलाई सबैभन्दा ठुलो सफलता मान्छन् । युइएफए च्याम्पियन्स लिग सन् १९५५ मा सुरु गरिएको थियो तर यसको हाल चलिरहेको फम्र्याट भने १९९२ मा मात्र बनाइएको थियो ।
च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्ने पहिलो टोली स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड हो । सन् १९५५–५६ मा भएको उक्त प्रतियोगिता जित्दै रियलले विश्वभरकै बलियो क्लबको परिचय दिएको थियो । च्याम्पियन्स लिगको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्ने क्लब रियल मड्रिड नै रहेको छ । रियल मड्रिडले हालसम्म ११ पटक च्याम्पियन्स लिग जितेको छः १९५५–५६, १९५७–५९, १९५९–६०, १९६५–६६, १९९७–९८, १९९९–२०००, २००१–०२, २०१३–१४, २०१५–१६ ।
च्याम्पियन्स लिगमा स्पेनिस क्लबहहरुले सबैभन्दा धेरै पटक च्याम्पिन्स लिगको उपाधि जित्न सफल रहेका छन् । स्पेनिस क्लबहरुले १६ पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेका छन् ।
च्याम्पियन्स लिगका दुई खेलाडीले सर्वाधिक गोल गरेका छन् । रोनाल्डोले ९५ गोल गरेका छन् भने लियोनल मेस्सीले ९४ गोल गरेका छन् । यी दुवै खेलाडीहरुले च्याम्पियन्स लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने सम्भावना अझै रहेको छ ।
च्याम्पियन्स लिगमा सबैभन्दा धेरै ह्याट्रिक गर्ने खेलाडी हुन् लियोनल मेस्सी । उनले ५ पटक ह्याट्रिक गरेका छन् । सख्तर डोनेस्टिकका खेलाडी लुइज एड्रियानोले च्याम्पियन्स लिगमा पहिलो ह्याट्रिक गरेका हुन् ।
यस्तो पनि आमा ! जसको संलग्नतामा आफ्नै १२ वर्षीया छोरीमाथि पटक–पटक बलात्कार
धनुषा । धनुषाकी एउटी महिलाले आफ्नै छोरीमाथि बलात्कार गर्न स्थानीय एक पुरुषलाई साथ दिएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।